Maitre Hanitra Razafimanantsoa : « Tsy hihemotra manoloana ny herim-pamoretana » -
AccueilSongandinaMaitre Hanitra Razafimanantsoa : « Tsy hihemotra manoloana ny herim-pamoretana »
Nanoloana ny zava-nitranga omaly tetsy Analakely, tamin’ny fidiran’ny mpitandro filaminana an-tsehatra nanaparitaka ny vahoaka tonga marobe namaly ny antson’ny mpomba ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, dia nanambara ny avy amin’ ny KMMR sy ny Legal Team fa tsy hihemotra manoloana ny herim-pamoretana.
“Mitohy ary hihamafy ny hetsika fanoherana ny hosoka sy hala-bato ary fanodinkodinana ny safidim-bahoaka. Tsy hisy hanaiky lembenana mora fotsiny eto satria mila fantatry ny vahoaka ny halatra sy hosoka faobe nataon’ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina, sy ny fanodinkodinana nataon’ny CENI, izay mpiray petsapetsa, tamin’ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika…”, hoy ny avy amin’ny KMMR.
Nohamafisin’izy ireo fa tsy azo fitahina ny vahoaka, ary tokony hajanona ny safidin’izy ireo. “Tsy mangarahara mihitsy iny voka-pifidianana iny. Ny fatananterahana ny fifidianana mihitsy no tsy mangarahara fa feno tsy fahatomombanana sy hosoka tanteraka”, hoy hatrany ny KMMR tarihin’ny Me Hanitra Razafimanantsoa.
Ankoatra izay, nambaran’izy ireo hatrany fa hihamafy ny hetsika satria mitaky ny fangaraharahana, ary manohitra ny fanodinkodinana ny safidin’ireo vahoaka marobe. Toraka izay ihany koa ny hetsika any amin’ny faritra, toa ny any Mahajanga, Moramanga, Manjakandriana, sns.
Raha ny fanazavana hatrany, tsy hiova toerana ny KMMR sy ny Legal Team, fa eo amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna hatrany izy ireo no hitafa amin’ny vahoaka, tsy manaiky ny hala-bato sy ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka. “Tsy maintsy hampahafantarina ny vahoaka ny hosoka sy ny hala-bato tamin’iny fifidianana iny, ary ny fampandanian’ny CENI ny kandidà Andry Rajoelina. Tsy misy tokony hafenina amin’ny vahoaka ny fizotr’iny fifidianana iny. Izay rahateo no tena mangarahara”, hoy ny Me Hanitra Razafimanantsoa.